Qarax weyn oo saaka Muqdisho ka dhacay – Radio Muqdisho
Qarax weyn oo saaka Muqdisho ka dhacay
Qarax gaari loo adeegsaday ayaa saakay ka dhacay ilinka laga galo xerada Xalane oo ah fadhiisanka ugu weyn ee AMISOM oo xeyndaab qura ay wada jiraan garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho.
Goob jooge la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in uu arkay gaari si xoog ah ku galay goob ciidanka wax ku baaraan (checkpoint) kadib uu xigay qarax weyn.
Qiiq madaw ayaa cirka ku isku shareerey qaraxa kadib, iyadoo inta badan dadka ku nool magaalada Muqdisho ay maqleen jugta qaraxaas.
Qaraxa ayaa ka dhacay waddada ka timaada degmada Wadajir ee soo gasha garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halka loo yaqaano Madiina Gate.
Waxaa goobta gaaray ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya kuwaas oo xaqiijinaya amniga, iyadoo saraakiil uu kamid yahay taliyaha hey’adda nabadd sugidda janaraal C/laahi Gaafow Maxamuud iyo saraakiil kale ay halkaas ku sugan yihiin.
Ilaa iyo hadda ma jiro khasaare la soo wariyay oo qaraxaas ka dhacay, wararka qaar ayaa sheegaya in wali ay rasaas ka socoto meesha qaraxa uu saaka ka dhacay.
Wixii ku soo kordha warka la soco insha’alah.
Kuwait oo sheegtay in ay qaban doonto shir waxbarashada Soomaaliya looga hadli doono
AMISOM: labo gaari ayaa lagu soo weeraray Xalane, waana laga hortagay